Musiibooyinka dabiiciga ah ee adduunka ka dhacay bishii…
Musiibooyin badan oo deegaanka ah ayaa adduunka oo dhan ka dhacay bishii Luulyo taas oo ay ku jiraan dabka ka kacay kaynta ku taalla Ukraine, duufaan Russia, dhul gariir ka dhacay Myanmar, Nepal, China iyo daadad badan oo dhashay roobab mahiigaan ah iyo fatahaadaha wabiyada wadamo ay Soomaaliya ka mid tahay.
Hadaba waa ku wee wadamada ay ka bililiqeysteen musiibooyinkaasi?.
Daadad xoog leh ayaa saameeyay inka badan 1.4 milyan oo qof oo ku nool gobolka Assam, waqooyi-bari Hindiya, sida ay sheegeen masuuliyiinta xakamaynta iyo hortaga masiibooyinka ee dalka Hindiya.
Ugu yaraan 110 macdan qodoyaal ah ayaa dhintay ka dib markii uu soo dumay godkii ay macdanta ka qodayeen iyo miino lagu aasay gobolka Kachin, waqooyiga Myanmar, sida ay sheegeen laamaha gurmadka degdega ah ee wadanka.
Ugu yaraan sideed qof ayaa ku dhintay in kabadan 2,300 oo gurina waxaa waxyeeleeyay daadad ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah Mongolia oo ah wadan dhaca xuduudka u dhexeeya Shiinaha iyo Ruushka, waaxda gurmadka deg degga ayaa leh dalkaasi ayaa xaqiijiyay
Daadadka, waxaa sababay roobab culus, waxa ay dileen ugu yaraan 50 qof koonfurta Japan, oo ay ku jiraan gobollada Kyushu iyo Fukuoka ee dalkaasi.
Dab ka kacay kaymaha bariga Ukraine ayaa diley afar qof, dhaawacayna sagaal kale, halka 110 guri ay burbureen, sida ay sheegeen waaxda gurmadka deg degga ah ee dalkaasi.
Tornado oo ah dabayl roobab wadatay ayaa Otter Tail, bartamaha Minnesota ee Mareykanka waxa ay ku dishay hal ruux sidoo kale waxaa ka dhashay dhaawaca labo kale, sida ay sheegeen warbaahinta gudaha.
Boqolaal caruur ah ayaa laga daadgureeyay xerada xagaaga oo ku taal koonfurta-dhexe ee Griiga kadib markii dab duurku qarxay, sida ay masuuliyiintu sheegeen.
Dhul gariir, oo ay sababeen roob mahiigaan ah, ayaa diley ugu yaraan 60 qof halka in kabadan 40 qofna lagu la’yahay dalka Nepal, sida ay sheegeen saraakiisha gurmadka deg dega ah.
Laba qof ayaa ku dhintay, kumanaan kun ayaa ka barakacay magaalada Rio Grande do Sul, oo ku taal koonfurta Brazil iyadoo dhowr webi ay buux dhaafiyeen, roobabkii da’ay.
Ugu yaraan laba qof ayaa dhintay, 11 kalena waa dhaawacmeen kadib roob culus oo ka da’ay gobolka Black Sea ee dalka Turkiga waxaana sababay daadad badan oo ku soo rogmaday dalkaasi.
Ugu yaraan afar qof ayaa dhimatay kadib daadad ka dhashay roobab ka da’ay waqooyiga bari ee gobolka Artvin ee Turkiga.
Tobannaan kun oo dadka deegaanka ah ayaa la nool koronto la’aan, maaddaama duufaano aad u daran iyo roob culus ay ku dhufteen galbeedka Ruushka taas oo sababi doonta in xaalad degdeg ah loogu dhawaaqo aagga Saratov ee St. Petersburg.
Ugu yaraan 15 ayaa ku dhimatay halka 4,000 oo qof ayaa ay ka baraceen kadib daadad ka dhashay Koonfurta Sulawesi, Indonesia, sida ay sheegayaan wararka deegaanka laga helayo.
Ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintey koonfurta Talyaaniga daadad, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee ANSA ee Talyaaniga.
Ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay dhul gariir ka dhashay roobab mahiigaan ah oo ka da’ay deegaanka Kaizhou ee degmada Chongqing, ee koonfur galbeed Shiinaha.
Ugu yaraan 62 qof ayaa ku dhintey Bangladesh sababo la xiriira daadad ay sababeen roobab mahiigaano ah iyo biyaha webi ku fatahay Hindiya oo daris la ah dalkaasi.
Dabka ka kacay kaymaha waqooyi-galbeed ee Turkey ayaa gubay qiyaastii laba hektar oo dhul-beereed ah (5 acres) iyo ku dhawaad sideed hektar (20 acres) oo dhul beereed ah.
Illaa shan qof, oo ay ku jiraan saddex carruur ah, ayaa ku dhinta Gobolka Ha Giang ee buuraha waqooyiga Vietnam, maadaama roobab culus ay sababeen daadad xoogan oo ka jira gobolka.
Iyada oo in kabadan 80 qof ay ku dhinteen daadadka woqooyi bari ee Hindiya iyo 2.4 milyan oo qof ay saameeyeen, in kabadan 100 xayawaan, oo ay ku jiraan 11 Wiyil ah, ayaa sidoo kale ku dhintey beerta Kaziranga ee Assam state, sida laga soo xigtay saraakiisha.
Qiyaastii 37,000 oo qof ayay saameeyeen daadad ku soo rogmaday gobada Shabeelooyinka ee Soomaaliya, sida ay sheegeen saraakiisha maaraynta musiibooyinka ee Muqdisho.
Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay dhowr kalena waa lagu dhaawacay shilal kala duwan oo daadad sababay oo ka dhacay bariga Pakistan ee gobolka Punjab ee Pakistan.
Dab-duureedyo ka kacay woqooyiga California ee Mareykanka, ayaa gubay inka badan 23,000 acres oo dul beereed ah maalmo gudahood.
Tirada dhimashada ee daadadka Bangladesh ayaa kor uga kacday 119 iyada oo sideed kale ay dhinteen 24-kii saac ee la soo dhaafay, saraakiisha ayaa sidaas leh.